Ogaden News Agency (ONA) – War deg deg ah: Dagaalo ciidamada cadawga lagu jabiyay & xasuuq shacabka loo gaystay.
War deg deg ah: Dagaalo ciidamada cadawga lagu jabiyay & xasuuq shacabka loo gaystay.
Posted by Daljir	/ June 28, 2016
Wararka naga soo gaadhaya galbeedka gobalka Jarar gaar ahaan tuulooyinka Cobale Higlalay Geedi Aar Magaalocad iyo Guman oo kawada tirsan dagmada Dhagaxbuur kagana beegan magaalada Dhagaxbuur dhinaca galbeed ayaa waxaa la isugu keenay waxgaradkoodii tuulada Labi-Caleen Dhagaxbuur ujirta 8 kiilo mitir dhanka galbeed waxaana lagu amray bulshadu inay isugu timaado tuulada hadaba dadka halkaas lagu shiriyay ayaa ah inta xooladhaqatada ah.
Sidoo kale waxay dhibaatadu kasocotaa tuulooyinbadan oo gobalka Jarar ah onan faahfaahitooda wali helin.
Sidookale gobalka nogob qaybo kamida ah ayaa la sheegayaa in uu kajiro xasuuq baahsan oo lagu hayo dadka reer miyiga ah.
Dhinaca kale 25/6 2016 yoocaley oo katirsan Jarar kana xigta dhinaca koonfur waxaa ka dhacay dagaal culus kaas oo ay qaadeen ciidamada jabhada onlf waxaana dagaalkaa ku dhintay ninkii watay dabaqoodhiga macaan jecesha ah.
Sidoo kale waxaa gurmad dag’dag ah dalbaday ciidamadan hawaarinta ee la gumaaday kadibna waxaa dhexda ugalay cutub ka tirsan ciidamada jwxo kuwaas oo u gaystay khasaare laxaad leh
Shalay oo ah maalin kadib markii uu dagaalku dhacay ayaa waxay ciidamada cadawgu meeshii ka kaxaysteen labo wiil oo geeljire ah laguna kala magacaabo Farax Aaqib muxumed iyo Saahid oona magaciisa sadexan haynin.
Wararkan iyo wixii kasoo kordha dib ayaan idiin ka soo gudbin doonaa Insha Allah.
ONA Kulmiye, Ogadeniya